Foton Electric Bus, Foton Cummins, Foton Tunland Cummins - Foton
Tsy misy tahotra fa mitondra am-pitokisana.
Ny bus Foton dia manolotra bisy sy mpanazatra isan-karazany manomboka amin'ny bus mahazatra sy ny mpanazatra hatrany amin'ny bus tsy misy herinaratra madio ary koa bus fitaterana herinaratra mifangaro ho an'ny serivisy an-tanàn-dehibe sy iraisana.
Niverina tamin'ny fanatontoloana
SAUVANA, marika FOTON SUV, ampandehanin'ny motera Foton Cummins miaraka amina hery voajanahary.
Andian-kamiao vaovao vaovao be dia be an'ny FOTON, novolavolain'i Foton Daimler Automotive, mizara ny herin'ny fahatokisana aminao.
Ny andiam-pitaterana vaovao vaovao vaovao FOTON, fiarovana, fampiononana, hery, faharanitan-tsaina dia nohavaozina avokoa. Miaraka amin'ny fahombiazan'ny fifaninanana, AUMARK S no mitondra ny orinasanao.
Mandeha mihoatra ny sisintany, voafehy ny zava-drehetra.
Hatramin'ny nanorenany, ny Foton Motor dia nifantoka tamin'ny asan'ny fiara fiara-miasa
Miaraka amin'ny orinasam-pifamoivoizana fiara mifandimby rehetra, ny Foton Motor dia iray amin'ireo mpanamboatra fiara mpitondra entana manerantany.
Van, pickup ary SUV
Kamio mavesatra maivana
FOTON AUMARK marika
Kamio mpanelanelana sy andraikitra mavesatra
FOTON AUMAN marika
Bus & mpanazatra
Bus sy mpanazatra FOTON AUV
Mikendry ny hanao fandrosoana amin'ny siansa sy ny haitao, mamokatra vokatra mpamonjy herinaratra, tia tontolo iainana ary mifamatotra am-pahendrena.
Mpanamboatra fiara mpitondra entana manerantany entin'ny teknolojia.
MIARAHA AMIN'NY FOTON
Fanatsarana fanantenana, fahatokisana ary natiora.
Hatsaran'ny olombelona, ​​fiara, tontolo iainana.
Foton Daimler Automotive, nanomboka tamin'ny 2008.
Fiaraha-miombon'antoka Foton Cummins, nanomboka tamin'ny 2006.
Angovo, faharanitan-tsaina ary fanavaozana vaovao.
Ny fenitra sy ny fahaizan'ny orinasa manerantany.
Teknolojia mankany amin'ny ho avy
Mivezivezy, Smart Fleet ary mifandray.
Foton Motor Vietnam Strategy dia natomboka, AUMAN vaovao vaovao ary AUMARK efficency de région ny fiara fitaterana vaovao BEBE KOKOA
FOTON AUMAN EST-A nasehony tamin'ny IAA 2018, naneho ny hetahetan'ny fampandrosoana avy amin'ny Deep Cooperation BEBE KOKOA
Ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny famatsiam-bola any Afrika, ny Foton Motor dia miara-miasa amin'ny CADF sy CAFIC hiara-mamorona fomba fampandrosoana fampandrosoana vaovao an'i Shina-Afrika BEBE KOKOA
Fanamafisana ny fiaraha-miasa ary ny famoronana miaraka ny ho avy —— Manokatra lamina stratejika vaovao ao Myanmar i Foton BEBE KOKOA
Ny zava-misongadina rehetra amin'ny hetsika FOTON amin'ny fandefasana, fampisehoana moto iraisam-pirenena, ary ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny tsena
Foton dia manampy ny fanatsarana ny fanoherana ny areti-mifindra any Filipina BEBE KOKOA
Nentina maika tany Filipina ny mpamonjy voina faneriterena noho ny fanararaotan-tsolika Foton BEBE KOKOA
Ny sela Foton AUV finday tonga tany Syria hanaovana fandidiana BEBE KOKOA
Foton dia nandefa bus fitaterana angovo vaovao miisa 2.790 ho any Beijing BEBE KOKOA
Raha misongadina bebe kokoa amin'ny horonan-tsary, fidirana an-tserasera amin'ny Facebook, YouTube ary media sosialy.